Ukuthola ukukhangisa kwe-SEO Yakho Yendawo Ngakwesokudla Ngezingcebiso Ezifanayo
Wonke amabhizinisi wendawo angaphumelela nge-portal inthanethi yokuthola izivakashi. Isibonelo, kubalulekile ukuba inkampani ifake uhlelo lokukhangisa lwendawo lwangaphakathi lokwenza izivakashi eziningi zewebhusayithi yazo. Amabhizinisi aphumelelayo asetha amasayithi amakhulu futhi afaka isevisi yendawo ye-SEO s ukuvuselela ukusebenza kwecebo labo lokumaketha - leak proof e-cig tank tips. Abadayisi be-Digital basebenzisa izindlela ezahlukene ukuze bathole amaklayenti abo e-intanethi. Ngesikhathi esifanayo, abanye abantu abaningi bangaba nendlela ephephile yokufinyelela kumakhasimende abo amaningi ku-intanethi kanye nokugcina ubuhlobo besikhathi eside namakhasimende abo.
Ukusebenza kwe-Injini Yokusesha isebenza ngokukhulisa isimo samawebhusayithi kanye nokwenza iwebhusayithi ijwayele amehlo ezinkampani ezikhona. Uma i-website ithola isikhundla esiphakeme ku- injini yokusesha , kunamathuba okuthola iningi lamazinga okuchofoza kuma-injini yokusesha. Izinsizakalo ze-SEO zendawo zinikeza isiteji esihle kakhulu sokwenza abasebenzisi bakwazi ukuncintisana ngendlela efanele. UMichael Brown, i-17 (Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwemakhasimende, ikunika ukuthi ubheke ezinye izindlela ezingenza i-SEO yakho yangakini iphumelele:
Kubalulekile ukucabangela ukusetshenziswa kwewebhusayithi yakho kudivayisi ephathekayo..Njengama-intanethi ubudala, abasebenzisi abaningi nabaningi bavame ukukhetha ukuphequlula ngokusebenzisa ifoni. Izinjini zokusesha nazo zikhetha ukubeka amasayithi anepulatifomu yeselula ngaphambi kwalabo abangenayo. Ezimweni eziningi, amasayithi anenzuzo yesikhulumi seselula ngenxa yokuthi ahambisana nezilaleli kanye nokuthuthukiswa okuhle kwe-UX. Ukwenza iwebhusayithi nge-interface esibonakalayo yomsebenzisi kusiza abantu ukuba babe nesipiliyoni esimnandi somsebenzisi. Lesi sici siqinisekisa ukuhambisana kwakho kokuqukethwe kanye nokwanele ekufundisweni kokuqukethwe.
Uma udala amawebhusayithi asebenza kahle ekusebenziseni, kulula kuyisici esibalulekile sokucabangela. Iwebhusayithi elula yenza kube lula ukufinyelela emaceleni ahlukahlukene futhi wenze ucingo oluningi lwezinkinobho zesenzo. Amabhizinisi amaningi aphumelelayo anamawebhusayithi alula noma yimuphi umsebenzisi angathola okuqukethwe kwawo kufinyeleleke. Kumele kube nephaneli lokuhambisa elula ukuze unike amandla abasebenzisi ukuthola izici ezibalulekile. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ulwazi lwebhizinisi linembile futhi luqondile. Iningi lala maklayenti baya kuwebhusayithi ukuthola izinto ezihle nezinto abazidingayo. Inqubo yokuthola lolu lwazi akumele iveze noma iyiphi inselelo kulowo muntu kumasayithi akho.
Kunezindlela eziningi ngosizo ongazuza ngalo kuwebhusayithi. Okokuqala, zikhona izivakashi ezintsha nsuku zonke zifuna amanye amagama angukhiye ezidakamizwa ze-search engine. Ngensizakalo ye-SEO esebenzayo, kungenzeka ukuba wenze inzuzo yewebhusayithi ngenani elikhulu kunazo zonke lezivakashi eziza kuwebhusayithi yakho. Ukusebenzisa injini yokusesha kuhilela zonke izici eziyinhloko ezenza ukuthi iwebhusayithi izuze lolu hlobo lokuphumelela. Lo umhlahlandlela we-SEO ungenza isayithi lakho likhuphuke phezulu ukuze libeke isikhundla esiphakeme kuma-SERP. Ungakwazi ukwenza amasevisi we-SEO wangakini wesayithi lakho ngesikhathi esifanayo ukwenza kube khona ukuphendula.